Mac ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။ တစ်ဆင့်ချင်းသင်ခန်းစာ | ငါက Mac ပါ
သင်၏ Mac ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ
ဒီသင်ခန်းစာမှာအကောင်းဆုံးဘာသာစကားကိုသတ်မှတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ရှိသောရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်တူညီသောဘာသာစကားကိုတစ်ချိန်လုံးအသုံးပြုပါက macOS တွင်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီကိုသင်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဆန့်ကျင်။ သင်သည်ဘာသာစကားများစွာ၊ သင်၏မိခင်ဘာသာစကားကိုသုံးသော်လည်းအလုပ်ခွင်၌ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ဖြစ်စေဒုတိယဘာသာစကားကိုအသုံးပြုပါကသင်လုပ်ဆောင်ရမည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါလိမ့်မည်။
သင်၏ Mac ၏ဘာသာစကားကိုကောင်းစွာရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်အနည်းဆုံးစပိန်ဘာသာစကားဖြင့်ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာရွေးချယ်မှုအမှားတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့အား @ သင်္ကေတရေးသားခြင်းကဲ့သို့သောဘုံလုပ်ဆောင်မှုများကို၎င်းအားနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းအဖြစ်မလုပ်ရန်တားဆီးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
1 macOS မှာဘာသာစကားကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ။
2 ကျွန်ုပ်တို့သည် Operating System ၏ဘာသာစကားကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း။
3 Mac ကီးဘုတ်၏ဘာသာစကားကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။
ပထမဆုံး configure လုပ်ရမယ် Operating System ဘာသာစကား နောက်မှ Mac တွင်သင်ရေးလိုသည့်ဘာသာစကား၊ input အရင်းအမြစ်. operating system ၏ဘာသာစကားနှင့်စာအရေးအသားဘာသာစကားသည်မကိုက်ညီပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Operating System အတွက်စပိန်ကိုရွေး။ အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်ကိုရွေးနိုင်သည်။ ဥပမာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဘာသာစကားများဖြင့်စာသားရေးရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Operating System ၏ဘာသာစကားကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း။
Mac တွင် system setting အားလုံးသည် P ၌ရှိသည်System ကိုကိုးကား။ သငျသညျအသုံးပြုသူအသစ်ဖွစျသျောလညျးဤနညျးမြားကိုသူတို့အလိုလိုသိသောကွောငျ့သုံးနိုငျသညျ။ System Preferences ကိုရယူရန်
အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် နှိပ်, sportlight နှင့်အတူကမြွက် CD + အာကာသ။
ဘား၌တည်၏ ပေါ်လာတဲ့ System Preferences ကိုရိုက်ပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, စာသားမရေးသားမီ, သင်နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုရန်လိမ့်မည်သည့်လျှောက်လွှာ တစ်ဂီယာ၏သင်္ကေတ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာအိုင်ကွန်ကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည် ဘာသာစကားနှင့်ဒေသ, အပြာရောင်အလံအိုင်ကွန်နှင့်အတူစနစ်အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ထပ်မံပြုလုပ်ပါကသင်သည်အလားတူစွာထပ်မံလုပ်ဆောင်လိုပါက "အလွဲသုံးစားမှု" ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ အသုံးချပရိုဂရမ်၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်ရေးနိုင်သည်။ ဘာသာစကား. ပုံသည်ညွှန်ပြသည့်စာသားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည့်နေရာများကိုလျော့နည်းစေသည်သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်ဘာသာစကား၌တည်၏။
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပြီးနောက် ဘာသာစကားနှင့်ဒေသ ၏အဓိကမျက်နှာပြင် ဘာသာစကားရွေးချယ်မှု။ ဘယ်ဘက်တွင် Mac တွင်ရွေးချယ်ထားသောအသုံးအများဆုံးဘာသာစကားများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်လက်ရှိဘာသာစကားသာရှိသည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲလိုသည်။
ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် "+" သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ , အောက်ခြေမှာတည်ရှိပါတယ်သော။
ဂရုတစိုက်ကြည့်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ဟာသူတို့ရဲ့မျိုးကွဲတွေအားလုံးနဲ့ဘာသာစကားတွေအများကြီးကိုတွေ့လို့ပါ။ ဥပမာ၊ စပိန်ဘာသာစကား ၁၀ မျိုးကျော်ရှိတယ်။
၎င်းကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် macOS သည်ကျွန်ုပ်တို့ Mac ၏အဓိကဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲလိုသလားဟုမေးသည် ရွေးချယ်ထားသောတ ဦး တည်းအားဖြင့်သို့မဟုတ်လက်ရှိတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုပြီးဆက်လက်။ ကျနော်တို့လိုချင်သောတရွေးချယ်ပြီးလက်ခံသည်။
ဒီအီးကိုစိတ်ထဲမှာထားရမယ်ဘာသာစကားပြောင်းလဲမှုသည်အရေးအသားသာမကဘဲထိုဘာသာစကား၏ nomenclature တစ်ခုလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည် ကိန်းဂဏန်းများ၊ ရက်စွဲများ၊ ပြက္ခဒိန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အပူချိန်ကိုဖော်ပြရန်နည်းလမ်းတို့၏ဖော်ပြချက်အရဖြစ်သည်။ MacOS သည်ထိုဘာသာစကားအတွက်ပုံမှန် nomenclatures ကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာစပိန် (စပိန်) ကိုရွေးပါကစုဆောင်းသည်။
ဒေသ စပိန် - ရွေးချယ်ထားသောအချိန်သည်ကျွန်းဆွယ်စပိန်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ရက်သတ္တပတ်၏ပထမနေ့ တနင်္လာနေ့ - ဒေသခံပြက္ခဒိန်တွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း။
ပြက္ခဒိန်: ဂရီဂိုရီယန် - စပိန်ဘာသာစကားတွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။
အပူချိန် Celsius ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးချက်များအရအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့် parameters ကိုမဆိုညှိနိုင်သည်။
အရင် ၀ င်းဒိုးမှမထွက်ပဲအောက်ခြေတွင်ဖော်ပြထားသောခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် ကီးဘုတ်ရွေးချယ်မှု panel ..။ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကီးဘုတ်ထည့်သွင်းသည့်ရင်းမြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့စားပွဲခုံမှာရောက်နေတယ်လိုလျှင် ကီးဘုတ် input ကိုရင်းမြစ်ကိုရယူပါကဏ္inတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် preferences များကိုဖွင့်ရမည် Operating System ၏ဘာသာစကားဖြင့် setting များကို။ သင်သည်အဓိကစနစ် ဦး စားပေးမျက်နှာပြင်တွင်ရှိနေစဉ် -
သင်တစ်ခုထည့်သွင်းလိုပါက "+" သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ နှင့်ရရှိနိုင်ကီးဘုတ်အားလုံးတစ် ဦး စာရင်းပြတင်းပေါက်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
အောက်ခြေမှာက ရှာဖွေသူ။ သင်လိုအပ်လျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
တွေ့ရှိပြီးတာနဲ့၎င်းကို select လုပ်ပါက၎င်းပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည် ရရှိနိုင်သည့်ကီးဘုတ်ကီးဘုတ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ အောက်ခြေမှာနောက်ထပ် function နှစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ကီးဘုတ်ဘားထဲမှကီးဘုတ်ကိုပြပါ ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့သင်္ကေတကိုပြလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာစကားများကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲသောအခါအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကီးဘုတ်နှင့်အက်မိုဂျစ်များကိုခွင့်ပြုသည်။
စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု၏ input ရင်းမြစ်သို့အလိုအလျောက်ပြောင်းပါ: macOS သည်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားသောဘာသာစကားကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးအလိုအလျောက်ပြောင်းနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါး၏အစကိုပြန်သွားပါ။ ငါတို့မရွေးဘူးဆိုရင် စပိန် - ISOစင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအမှတ်အသားများကိုမှတ်သား။ မရပါ။ at, accents, hyphens စသဖြင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင်၏ Mac ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ
Alejandro ဟိုဆေး ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်သည် operating system ၏ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် firefox, word, ect ကဲ့သို့သော program များကိုလည်းပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
alejandro jose အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည်ညွှန်ကြားထားသည့်အဆင့်များကိုကောင်းမွန်စွာလိုက်နာပါသည်။ သို့သော်ထိုနည်းတူစွာပင်အင်္ဂလိပ်သည်တစ်ခုတည်းသောဘာသာစကားဖြစ်နေဆဲ (ကျွန်ုပ်၏စပိန်ဘာသာတွင်) ကိုနှစ်သက်သောဘာသာစကားအဖြစ်ဆက်လက်မရောက်စေရန်တားမြစ်ထားပါသည်။
iCloud Drive မှမျှဝေထားသောဖိုင်များကိုဖျက်ပါ